အမျိုးအနွယ်ကိုအပင်ပေါက်ရန်အတွက် | မှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း Taiwan ,OEM,ODM-cropprotectionmachinery.com
ကျနော်တို့ကနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာများမှာ Taiwan အမျိုးအနွယ်ကိုအပင်ပေါက်ရန်အတွက် ထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းနှင့်တင်ပို့သူ။ တည်ငြိမ်တဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ် မူတည်. ထက်သာလွန်အရည်အချင်းကိုနှင့်ကောင်းမွန်သောပြီးနောက်-ရောင်းချဝန်ဆောင်မှုကျနော်တို့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်တင်ပို့သူများတစ်ဦးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေကြပြီ။ ကျွန်တော်တို့ဟာအရည်အသွေးထုတ်ကုန်များနှင့်စျေးနှုန်းအပြိုင်အဆိုင်နှင့်သင်တို့အဘို့အ-on အချိန် delivery မှာကတိပေးပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်အတူနှစ်ရှည်စီးပွားရေးထူထောင်ခဲ့ကြပါပြီ။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်မဆိုစံပြအတွက်စိတ်ဝင်စားပါက, အခမဲ့ဖြစ်ကျေးဇူးပြုပြီး ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ထုတ်ကုန်အမည်:စက်ရုံမီးခိုး-ရေထုတ်ယူ device ကို
သင်္ဘောသီးအမျိုးအနွယ်၏ longitudinal အပိုင်း.ရငျ့ကကျြသင်္ဘောသီးအမျိုးအနွယ်၏ microstructure ထူးခြား meristems အတူအပြည့်အဝဖွံ့ဖြိုးပြီးသန္ဓေသားများပါဝင်သည်,radicle,နှင့် cotyledons.ရင့်ကျက်မျိုးစပါးအတွက်,အမျိုးအနွယ်ကိုဆေးတောင့်အလွှာသုံးလွှာရှိပါတယ်,mucilage ပါဝင်သည်ဟု,seedcoat,နှင့် seedcoat တစ် mesophyll အလွှာ.အဆိုပါ seedcoat အတွင်းပိုင်း micropylar endosperm ၏တစ်ခုတည်းသောဆဲလ်အလွှာဖြစ်ပါသည်,သောဦးထုပ်ကိုဖုံး-endosperm နှင့် radicle အစွန်အဖျားများကဲ့သို့.ဒီလေ့လာမှုမှာ,မီးခိုးနဲ့ကုသသင်္ဘောသီးအစေ့အ longitudinal အပိုင်း၏ရလဒ်များကို-ရေမီးခိုး၏အနိမ့်ပြင်းအားပြသ-ရေ(0.1%နှင့်0င်.2%)ကှဲထှကျဖို့ဆန့်ဖို့ endosperm နှင့် seedcoat နှိုးဆွပေး,အဆိုပါ radicle elongate နှင့်ပေါ်ထွက်လာဖို့ခွင့်ပြု.အရှင်အမျိုးအနွယ်ကိုအပင်ပေါက်ရန်အတွက်ဖြည့်.
မီးခိုး-အမျိုးအနွယ်ကိုအပင်ပေါက်ရန်အတွက်တိုးတက်အောင်ဘို့ရေကိုပြသအလားအလာရလဒ်များကို,တိုးတက်မှုနှုန်း seedling နှင့်အချို့သောစက်ရုံရောဂါထိန်းချုပ်.ဖြည့်စွက်ကာ,မီးခိုး-ရေဖြစ်နိုင်သည်စီးပွားဖြစ်ဓာတုဓာတ်မြေသြဇာများအသုံးပြုခြင်းချွေနိုင်ပါတယ်,fungicide,ကမဟုတ်တဲ့များအတွက်ဖြစ်နိုင်နည်းပညာအောင်-ဓာတုပိုးသတ်ဆေးစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံ.
စက်ရုံမီးခိုး-ထိုင်ဝမ်မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ရေထုတ်ယူ device ကိုစက်နှင့်တရုတ်မူပိုင်ခွင့်လက်မှတ်ကို.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.cropprotectionmachinery.com/my/seed-germination.html
အမျိုးအနွယ်ကိုအပင်ပေါက်ရန်အတွက် ထုတ်လုပ်သူနှင့် အမျိုးအနွယ်ကိုအပင်ပေါက်ရန်အတွက် ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းစ ,OEM,ODM-ကျော် 48,665 ကမ္ဘာတဝှမ်းဝယ်လက်မှာ cropprotectionmachinery.com